जापानीज शब्द दाईजोउबुको अर्थ के हो ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > LANGUAGE > जापानीज शब्द दाईजोउबुको अर्थ के हो ?
भाषा र संस्कृति एउटा देशलाई चिनाउने सबै भन्दा बलियो पक्ष हो। ति भाषा मा बोलिने कुनै शब्दावली यस्ता हुन्छन जुन बोलिद धेरै प्रयोग मा आऊछन। जापान घुम्न या पढ्न आउने जो कोहि ले सुनी रहने त्यस्ता शब्दहरु भन्नु पर्दा कावाई (राम्रो), सामुइ (जाडो), आचुइ (गर्मि), ने ( हैन त), आरिगातोउ (धन्यबाद), माता ने ( फेरी भेटौला) हुन्। यी बाहेक एउटा यस्तो शब्द छ जसले अनेकौ अर्थ बोक्छ। त्यो शब्द हो “दाइजोबु”। यो शब्द नसुनेको र नबोलेको मान्छे जापानमा कम नै हुन्छन।
मजाको कुरा, यो शब्द को अनेकौ अर्थ लाग्छ। सन्दर्भ हेरेर बोलिएन भने एउटा कुरा भन्नु पर्ने ठाउँमा अर्कै कुरा भनिन गईनछ| आज हजुरहरुलाई यो शब्द कुन बेला कसरि बोल्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा बताउछौ।
“दाइजोबु देसु “
सर्बप्रथम त दाइजोबु शब्द कसरी बन्छ त्यो हेरुम। जापानिज भाषा मा दाइजोबु “大丈夫” यसरी लेखिन्छ। यो शब्दको 大 भन्नाले ठुलो , 丈 भन्नाले उचाई र 夫 भन्नाले श्रीमानलाई जनाउछ। यी शब्दहरु मिलेर के गरि “दाइजोबु” यानिकी “ठिक छु” बन्यो भन्ने कुरा छलफल को विषय हुन सक्छ तर आज को हाम्रो उधेस्य चाहि यो शब्द को अनेक अर्थ बुझ्नु हो।
“मलाई ठिक छ, पिर नगर्नुस।” यहि हो दाइजोबु क अर्थ । केहि उदाहरण हेरुम है त।
“आधा घण्टा भैसक्यो। तिमि समयमै आऊन सक्छौ नि ?” – “दाइजोबु देसु”
“तिमीलाई रुगा खोकी लागेको भनेको सुनेको थीए, अहिले कस्तो छ ?” – “दाइजोबु देसु
“हिजो म ढिला भए है। माफ गर ल।” – “दाइजोबु देसु”
येही वाक्य मा हेर्नु त दाइजोबु को अर्थ भिन्न भिन्न छ। त्यस माथि अहिले का जापानिज युवा पिडिहरुले यो शब्द को प्रयोग धेरै सन्दर्भमा गर्ने भएकाले के भन्न खोजेको हो बुझ्न गारो हुन्छ। तल दिइएका ठाउँ मा प्रयोग गरिएको दाइजोबु को अर्थ हेरुम है त।
वेटर ले तपाईलाई पानी चाहिन्छ भनेर सोध्दा तपाईले “दाइजोबु देसु” भनू भयो भने, अर्थ “हैन पर्दैन भन्ने हुन्छ”। तेसै गरि यदि उसले के म तपाईको ग्लासमा पानी राखिदीउ भन्दा तपाईले दाइजोबु देसु भन्दा दुइ अर्थ लाग्छ। हुन्छ हाल्दिनु वा नाइँ पर्दैन। त्यसकारणले अर्थ प्रस्ट हुन जादैन। त्यो बेला दाइजोबु देसु मात्र भन्नु को सट्टा हाई दाइजोबु देसु (हुन्छ हाल्दिनु) वा ईए दाइजोबु देसु (नाइ पर्दैन) भन्दा बोलि को अर्थ प्रस्ट हुन जान्छ।
२ खाइमोनो (सपिङ्ग) गर्दा
मानौ तपाईले खोज्नु भएको लुगा त भेट्नु भयो तर कलर चाहि भेट्नु भएन। त्यो बेला तपाईले त्यहाँ को स्टाफ लाइ अर्को कलर मा छ भनेर सोध्नु भयो। उसले सरल वाक्य मा छ नभनेर दाजोबू देसु भन्न सक्छ जसको अर्थ नि छ नै हुन जान्छ। सुपरमार्केट मा ग्रोसरी किनेर रेजि(चशिएर) मा जानु भयो। त्यहाँ स्टाफ ले प्लास्टिक चाहिन्छ भनेर सोध्दा, हजुर ले दाइजोबु देसु मात्र नभनेर माथि लेखेको जस्तै हाई दाइजोबु देसु (हुन्छ हाल्दिनु) वा ईए दाइजोबु देसु (नाइ पर्दैन) भन्दा बोलि को अर्थ प्रस्ट हुन जान्छ।
३ सहयोग(हेल्प) लिनु पर्दा
मलाई याद छ, जापान सुरुचोटि भारी सुटकेस बोकेर आउदा, एउटा जापानिज ले एरपोर्ट मा भर्याङ् उतार्न हेल्प गरेको। जापानिज हरु सहायोग गर्ने खाले हुन्छन। यदि तपाईलाई केहि कुरा मा कसैले हेल्प गरू भन्दा दाइजोबु देसु भन्नु भयो भने , त्यस को अर्थ पर्दैन म एक्लै सक्छु भन्ने हुन्छ। हेल्प चाहिएको खण्डमा अरिगातोउ गोजाइमास , ओनेगाइसिमास भन्ने गर्दा अनर्थ लाग्दैन।
यी त केहि अदाहरण मात्र हुन्। जापान को बसाइ लामोहुदै गए पछि यस्तो सिचुएसनहरु धेरै आऊछन। बिस्तारै बिस्तारै हात को इसारा, बोलि को तरिका, अनुहार को लबज बाट पनि “हो” वा “हैन” भन्ने कुरा बुझ्दै गइन्छ। भाषा भनेको बोल्नु वा बोलेको बुझ्नु मात्र हैन। भाषा भनेको संस्कृति र लबजसंग घुलमिल हुन सक्नु हो। अन्तिममा “मिनना दे गान्बात्ते इकिमस्योउ”।
जापानको गर्मि महिना जुन बाट सुरु भएर सेपटेम्बर महिना सम्म रहन्छ। हजुर जापानमा बसेको ठाउ अनुसार यहाँको गर्मि ह्युमिड र चिप चिप गर्ने वा जाडो बाट छुटकारा पाएर न्यानो मौसम हुने खालको हुन्छ। यदि हजुर होकाईदो र आओमोरि क्षेत्रमा बस्नु हुन्छा भने पक्कै पनि गर्मि महिनाको न्यानो घाम र उज्यालो दिनलाई मन पराउनु हुनेछ। तर…